कलियुगका कुरा: किन आत्तिएका अरु दल?
किन आत्तिएका अरु दल?
एनेकपा माओवादीले भर्खरै पुनगर्ठित गरेको राज्यका नेताहरुको नाम हेरेको। मगरात राज्यको संयोजक गिरिधरीलाल न्यौपाने ।
तमुवान राज्यको इन्चार्ज भीम गौतम र संयोजक हरी अधिकारी ।
नेवा राज्यको इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेल र संयोजक झक्कु सुवेदी ।
तामशालिनको इन्चार्ज विश्वभक्त दुलाल र संयोजक नारायण दाहाल ।
अवध राज्यको इन्चार्ज चन्द्रदेव खनाल र संयोजक वामदेव क्षेत्री ।
किरात राज्यको संयोजक वालकृष्ण ढुंगेल रहेछन् ।
जातीय पहिचाहन सहितको संघीयतामा विशेष जातिलाई अग्राधिकार भन्ने एमाओवादीले किन यसो गरेको ? तमुवान, नेवा, अवध सबका सबमा किन बाहुनलाई नेतृत्व दिएको?
अनि अरु दल किन आत्तिएको होला, धेरैजसो बाहुन, क्षेत्री छन् त राज्यका प्रमुख तै पनि एमाओवादीले जातीय पहिचाहन सहितको संघीयता बनाउन लागे भनेर किन चिच्याउनु ?